दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २४ गते मंगलवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १० - Sutra TV Sutra TV
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २४ गते मंगलवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १०
मेष : तपाईंमा भएको घृणा मार्न सुमधुर प्रकृतिको खेती गर्नुहोस्, किनभने घृणा प्रेमभन्दा धेरै शक्तिशाली छ र यसले तपाईंको शरीरलाई ठूलो असर गर्छ। नरामो कामले राम्रो कामभन्दा छिट्टै विजय प्राप्त गर्छ भन्ने जान्नुहोस्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। परिवारमा एकजना वृद्ध व्यक्तिको स्वास्थ्यले केही तनाउ पैदा हुन सक्छ। तपाईंले धेरै नै प्रेम गरेको व्यक्ति प्रति तपाईंको रूखो व्यवहारले सम्बन्धमा सामंजस्यता ल्याउन सक्दैन। तपाईं समय नै पैसा हो भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो उच्चतम लक्ष्यमा पुग्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। आज तपाईंलाई आफ्नो जोडीको कारण समस्यामा परेको महसुस हुन सक्छ।
वृष : द्वन्द्वबाट जोगिनुहोस् किनकि यसले तपाईंको रोग अझै बढाउन सक्छ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ, तर यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। परिवारको वातावरण बिग्रिन्छ। आज आफ्नो प्रेमीलाई केही भावनात्मक कुरा नभन्नु होला। तपाईंले निराशा भोग्नुहुनेछ, किनकि तपाईंले अपेक्षा गरेका पहिचान र पुरस्कार विलम्वित हुनेछन्। एउटा लाभदायी दिन किनकि केही कुराहरू तपाईंको पक्षमा जाने देखिन्छ र तपाईं संसारको शीर्षमा हुनुहुनेछ। आज, तपाईं र तपाईंको जोडी बीचको झगडामा कुनै सुन्दर स्मृतिको कारण विराम आउन सक्छ। त्यसैले, गरम तर्कको समयमा पुरानो सुन्दर दिनको सम्झना गर्न नबिर्सिनुहोस्।
मिथुन : तपाईंले आफ्नो बुद्धि कौशलता र कूटनीतिलाई आफ्नो मन बिरोल्ने समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ, तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। एक/अर्काको मत बुधेर व्यक्तिगत समस्याको समाधान गर्नुहोस्। यिनीहरूलाई सार्वजनिक नगर्नुहोस् अन्यथा तपाईंलाई बदनामी गर्ने सम्भावना धेरै छ। प्रेम र रोमान्सले तपाईंलाई आनन्दित मुडमा राख्ने थिए। मानिसहरूलाई काममा नेतृत्व गर्नुहोस्, तपाईंको निष्कपटताले प्रगतिसँग तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। पुरानो कुनै मित्रले तपाईंसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस दिनलाई अविस्मरणीय दिन बनाउने सम्भावना छ। आज आफ्नो जोडीले तपाईंको पीडा क्षण मै निकाल्न सक्छन्।
कर्कट : आध्यात्मिक जीवनको लागि जरूरी भएको तपाईंको मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्नुहोस्। राम्रो नराम्रो सबै दिमागको माध्यमबाट आउने हुनाले मन जीवनको द्वार हो। यसले जीवनका समस्याको समाधान गर्नमा मद्दत गर्छ र चाहिएको प्रकाश प्रदान गर्दछ। नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन्, पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। तपाईंको सधैंभरिको प्रेम आफ्नो प्रियको लागि एउटा नदी हो। काममा ढिलो प्रगति भएकोले केही तनाउ ल्याउँछ। असीम रचनात्मकता र उत्साहले तपाईंको अर्को फाइदाजनक दिन आउँछ। महिला भेनसबाट आएका हुन् र पुरुषहरु मंगलबाट। तर आज भेनस र मंगल एक/अर्कामा पग्लेका छन्।
सिंह : आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न पुनः सुरु गर्नको लागि सर्वश्रेष्ठ दिन। आज तपाईंको बाटोमा आउने नयाँ लगानीका अवसरको अन्वेषण गर्नुहोस्, तर यी परियोजनाहरूको समर्थता अध्ययन गरेर मात्र प्रतिबद्ध हुनुहोस्। आफन्तहरूको घरमा भेटघाटको लागि छोटो यात्रा गर्नाले आफ्नो दैनिक व्यस्त तालिकाबाट सान्त्वना र विश्राम मिल्नेछ। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन्, पुर्‍याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। तपाईंले अरूको सहयोग बिना महत्त्वपूर्ण कामहरू संचालन गर्न सक्छु भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईंले ठूलो गल्ती गर्नुहुँदैछ। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको लागि संगै खाएर शुभ रात्री बिताउने अपेक्षित छ।
कन्या : आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। किन्न बाहिर जानु अघि तपाईंसँग भएका वस्तुहरूको प्रयोग गर्नुहोस्। आज तपाईंले आफ्नो बुद्धि र प्रभावलाई घरका संवेदनशील विषयहरूको समाधान गर्न प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। मोमबत्तीको उज्यालोमा प्रियसँग खाना खानुहोस्। तपाईं आज काममा एउटा अचम्मको व्यक्ति भेट्न सक्नु हुनेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन, आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंलाईले आफ्नो जोडीसित पुराना रमाइला रोमान्टिक दिनहरूको आज फेरि कदर गर्नु हुनेछ।
तुला : बसेको बेला चोटपटकबाट जोगिन धेरै होशियार हुनुहोस्। त्यसमा पनि राम्रो मुद्राले व्यक्तित्व बढाउँछ र साथै स्वास्थ्य र विश्वासको सुधार गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आमाबाबुको सहायताले गर्दा वित्तीय बाधाहरु टर्दै गएको जस्तो देखिन्छ। मित्र र नजिकैका व्यक्तिहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछन्। आफ्नो प्रिय संगै नभएकोले तपाईंले आज परम आनन्दबाट खाली भएको अनुभव गर्ने सम्भावना छ। मालिकको राम्रो मुडले काममा सम्पूर्ण वातावरण कर्ममय बनाउन सक्छ। आज अनुकूल ग्रहहरूले खुसी महसुस गर्ने प्रशस्त कारणहरू ल्याउनेछन्। तपाईंले आज आफ्नो वैवाहिक जीवनका एउटा कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
वृश्चिक : निष्क्रिय समस्याहरू देखिन्छन् जसले गर्दा मानसिक दबाब पर्दछ। आज लगानी गर्नबाट बच्नुपर्छ। आत्मीय स्नेहले तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्नेछ। तर तपाईंले तुच्छ कुरामा आफ्नो स्वभाव गुमाउनु हुँदैन किनकि यसले मात्रै तपाईंको चासोमा हानी हुनेछ। तपाईंले केही प्रेम बाँडेमा, तपाईंकी प्रियतमा आज तपाईंको लागि एउटा दूतको रूपमा परिणत हुनेछिन्। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ, र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। आज जीवन साँच्चै सुन्दर हुन गइरहको छ, किनभने तपाईंको जोडीले कही विशेष कुराको योजना गरेको छ।
धनु : तपाईंको मनले राम्रा कुराहरू सुन्नेछ। अरूले भनेको मानेर लगानी गरेमा आज आर्थिक घाटाको सम्भावना देखिन्छ। आफ्नो दृष्टिकोणमा उदार हुनुहोस् र आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग राम्रो र प्यारो समय बिताउनुहोस्। तपाईं प्रेम प्रस्ताव राखेर धेरै खुशी हुनुहुनेछ किनकि यसले तपाईंको भारी हलुँगो पार्नेछ। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। आफ्नो जोडीसित आज तपाईंले धेरै खर्च गर्नु हुँदैछ भनेजस्तो लाग्दैछ, तर तपाईंसँग उत्कृष्ट समय हुनेछ।
मकर : तपाईंले आफ्नो शारीरिक शक्ति कायम राख्न खेलमा आफ्नो समय बिताउने सम्भावना छ। ठूलो समूहमा आफूलाई संलग्न गराएमा अत्यधिक मनोरंजक हुनेछ, तर तपाईंको खर्च भने धेरै माथि पुग्नेछ। आफ्नी पत्नीको उपलब्धि प्रशंसा गर्नुहोस् र उनको सफलता र सौभाग्यमा आनन्दित हुनुहोस्। आफ्नो कृतज्ञतामा उदार र निष्कपट हुनुहोस्। नयाँ प्रेम जडान गठन गर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ तर व्यक्तिगत र गोप्य जानकारी प्रकट नगर्नुहोस्। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार र कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। आज आफ्नो जोडीसित तपाईंले आत्मीय कुराकानी गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : रमाइलो गर्न बाहिर जानेहरूको लागि सरासर खुशी र आनन्द मिल्नेछ। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्‍याउनेछ। प्रियजनहरूसँग तर्क हुन सक्ने मुद्दाहरूबाट बच्नको लागि तपाईंले नै धेरै प्रयास गर्न सक्नु हुनेछ। तपाईंकी प्रिया केही रिसाएको जस्तो हुनेछिन् जसले तपाईंलाई दबाब थपिनेछ। तपाईं समय नै पैसा हो भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो उच्चतम लक्ष्यमा पुग्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई नभएर अन्य कसैलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मौका दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाउन सक्नु हुनेछ।
मीन : तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। तपाईंले मित्रहरूबाट सहयोग पाउनुहुनेछ, तर सावधानीसँग बोल्नुहोस्। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। आज तपाईंसँग शक्ति रहनेछ र आफ्नो कमाउने शक्ति कसरी जुटाउने भन्ने थाहा हुनेछ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। आज, तपाईंका जोडीको स्वास्थ्यको कारणले केही तनाउयुक्त रहन सक्नु हुनेछ।
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज ३ गते शुक्रवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर २०
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज २ गते बिहीवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १९
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ असोज १ गते बुधवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १८
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ ३१ गते मंगलवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १७
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ ३० गते सोमवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १६
दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ भदौ २९ गते आइतवार, ई.सं. २०१९ सेप्टेम्बर १५
नुहाउने क्रममा टाउकोमा अमिबा पसेर बच्चाको मृत्यु
सुरक्षाकर्मी र बुद्ध एयरको गम्भीर त्रुटिः विवादकाबीच किन उड्यो जहाज ?
हिरोइनले पनि चलाउँछन् हिरो
बर्षाले फिल्म नगरेर के भयो त !
सेक्स गर्दा पनि फाइदा, निको हुन्छन् यस्ता रोग
‘जनताको भाग्यरेखा कोरिएको दिन’ संविधान दिवसः मुख्यमन्त्री शाही
संविधान दिवसकै दिन कालो दिनभन्दै प्रदर्शन, नौ जना पक्राउ
दक्षिण एशियाली खेलकुदका लागि ९५ करोड निकासा
नाबालक छोरा र बाबुको हत्या अभियोगमा एक जना पक्राउ
नेपाल बराबरीमा रोकियो
नेपाल एयरलाइन्स सुधार्ने सूत्र